Etu ị ga-esi nweta Fans Creatmepụta na Shakekọrịta Ọdịnaya Maka Gị | Martech Zone
Anyị na-ekekọrịta otu LinkedIn jiri tinye akụkọ na akụkọ onye ọrụ iji mee ka ọ gbalịsie ike na-eme mgbalị iji nweta ahịa ma na-apụta ihe ọmụma a si Neil Patel - Etu ị ga-esi nweta Fans Creatmepụta na Shakekọrịta Ọdịnaya maka Gị. Ihe omuma ahu na-aga ma uru na akaebe nke ihe eji eme ihe (UGC).
Ọbụghị naanị na ọdịnaya onye ọrụ mepụtara ga - echekwa gị ego, mana ọ ga - ewetara gị ego. Ka ị na - eme ka ndị Fans na - etinye aka na azụmaahịa gị, etu a ka ị ga - esi tụkwasị ntụkwasị obi obi, ma mekwaa ka iru gị. Ga-ahụkwa uru SEO. Iji gosi gị otu ị ga - esi soro ndị ọbịa gị mee ka ha bido imepụta na ịkesa ọdịnaya gị, Quicksprout etinyela otu infographic nke kọwara usoro a.
Nye ngwaọrụ ma kụziere ndị Fans gị otu esi ede, kesaa ihe onyonyo na vidiyo yana gị na ndị ọrụ gị nwere ike ilekwasị anya na nhazi, ịmezi akụkọ ahụ nke ọma, na ịmịpụta ọdịnaya nke na-akwalite akara gị! Ọ bụ ezie na usoro ahụ chọrọ ịmegharị usoro azụmaahịa ọdịnaya gị, enwerekwa nchekwa (yana ọtụtụ ihe ịtụnanya) iji ọdịnaya onye ọrụ gị mee ka okwu ahụ pụta!
Tags: uGConye ọrụ mepụtara ọdịnayaonye ọrụ mepụtara onyonyoonye ọrụ-emevidiyo nke onye ọrụ
LinkedIn Nweta Onwe Ya na Akụkọ Ya